Akụkọ - gbasara bbq grill na-enweghị anwụrụ ọkụ
Mgbakọ bụ ụzọ kacha mma isi jikọọ na ndị enyi gị kparịta ụka; Ahịhịa anụ ahụ na nnọkọ ahụ nwere ike ịkwalite ọbụbụenyi n'etiti ibe ha.
Ma nkwadebe mmanya na-agwụ ike bụ nkwadebe na-agwụ ike na-enweghị enyemaka nke ndị ikwu na ndị enyi.
Kedu otu esi emeju usoro ndị a na-agwụ ike mgbe ị na-eju agụụ iri anụ ọhịa? Na China, ndị na-eto eto, ezinụlọ na ndị enyi ga-ahọrọ ụzọ pụrụ iche ha ga-esi na-eju anụrị ime mmụọ ha - nri abalị (Chinese pụtara XiaoYe)
Ọtụtụ mgbe nri nkịtị na nke dị mfe na-anwale oge. Iji mejuo ogologo nchere a, grills na-enweghị anwụrụ ọkụ na-ewu ewu na obere ụlọ nri.
Igwe ọkụ na-enweghị anwụrụ ọkụ na-anabata ụkpụrụ nke ikpo ọkụ stovu seramiiki n'akụkụ abụọ iji belata ohere nke ọkụ na-emeghe. N'ihi na grill ahụ na-adị ogologo karị, onye na-ehicha ntutu arụnyere na-enyere ọnọdụ kacha mma nke ngafe abụọ aka ikpokọta n'etiti iji nweta mmetụta nke kpo oku otu. N'ihi ọrụ a nke ọbụna ikposa ọkụ, nri anụ ahụ dị mma ma na-atọ ụtọ ebutela nkukota pụrụ iche.
Ngwakọta ntụ ọka, gbue nwa atụrụ, steaks, oporo, na nri mmiri nwere ike imeju ihe ụtọ niile a na-esi nri, usoro nri nwere ọgụgụ isi na ndakpọ ngwa nri. Ma ọ bụ nke a ga-abụ nnọkọ ezinụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa gwongworo nri, ọnụ ahịa kacha ala, onye enyemaka anwansi kacha ngwa ngwa.
N'ezie, maka ịdị mma nke dị iche iche nke ndị mmadụ, grill anyị na-enweghị anwụrụ ọkụ nwere ike ịhọrọ nha dị iche iche, mita 0.89, mita 1.2, mita 1.5, wdg, nke dị mma maka ngwá ọrụ BBQ azụmahịa. Ejirila akụrụngwa a n'okporo ụzọ nri ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na nri Vietnamese. N'okporo ámá, ọ bụrụhaala na ị na-eme njem, ị ga-ahụ ha. Akụ na ụba nke ngwaọrụ ndị a buru ibu, na-eme ka ị bụrụ ezigbo onye ọchụnta ego, malite n'oge a.